Sadax beenaale oo isku faantay iyo yaabkii meesha ka dhacay (ila qosol). – Filimside.net
Sadax beenaale oo isku faantay iyo yaabkii meesha ka dhacay (ila qosol).
January 20, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Taariikhda: January 20, 2019
Hada kahor sadax beenaale ayaa isku faantay iyadoo uu mid kasta leeyahay anaa ugu been badan iyo anaa ugu been badan.
Maalin kasta oo ay kulmaan waxay ahaayeen kuwa isku faana ilaa maalintii dambe uu mid kamid ah yiri maan u tagno dad nakala garsoora oo aan beenteena u bandhigano?
Sadaxdii beenaale ayaa arintaas isku raacay waxayna u yimaadeen dad si ay u kala garsooraan, dadkii ayaana yiri waan idiin kala garsooreynaa ee midkastow beentaad heyso soo daa.
Waxaa hadlay beenaalihii koowaad asigoo hadalka ku bilaabay; maalin ayaa anoo geel la jiro waxaan maqlay hugun iyo meel buuq ka yeeraayo waxaana is dhahay maad buuqaas soo fiirisid?
Dhiil yar oo caano iigu jireen oo aan watay ayaan waxaan surtay geed labi ah mise culeys daraadii geedkii ayaaba soo dumay…. Hadana waan soo qabtay waxaan surtay geedka jiridka weyn ee geed yaaqa ah saa culeys daraadii geedkii ayaaba soo jabay.
Inta yaabay ayaan dhiishii soo qaaday waxaana suray geed saaq ah alx ilaah mahadii waa ii celiyay, markaas ayaan anoo faraxsan imaaday meeshii uu buuqa ka jiray mise waaba ayeeydey oo aabahey dhalooso yaab.
Markii aabahey la dhalay ayaa la igu yiri war aabahaa waa la dhalee orod oo keen caanihii afka loogu celin lahaa.
Markaas ayaan waxaan soo xusuustay dhiishii caanihii ee geedkii saaqa ii surneyd, markaas ayaan soo baxay si aan usoo qaado mise waxaanba u imid dhiishii oo aboor cunay caanihiina geedka ii suranyihiin….
Inta yaabay ayaan caanihii geedka surnaa soo qaaday oo aan meeshii aabahey lagu dhalay keenay si aabahey oo markaas dhashay afka loogu celiyo.
Hadaba aniga yaa iga been badan????
La soco qeybta labaad iyo labada beenaale kale sheekadooda.
Waxaa Aqrisay 540
Cabdiraxmaan kuwa kale bari meqa sac ayad so galineysa insha Allah
Ahmed Yoolah says:
3 dan nin ee sawirka ka muuqda aad ayaan u taagera orginalkoda musalsalka the three stoogs lan nala wadaaga macluumadkoda kuwa. asalka ah ee horay u matali jiray 1920 meelaha ilaa 1945 ti
Waxaa Si Xatooyo Ah Loosoo Helay Deepika Padukone Oo Sameenaysaa Shumis Ugu Horeeyay Ka Dib Arooskeeda April 22, 2019
Isbadalka muuqaalka: is bar-bar dhig lagu sameeyay sawirada atariishada caanka ah Ee Karishma Kapoor April 22, 2019
Gabar Wey Dhaaftay Raveena Tandon Marba Hadii Quruxdeeda Isku Dagaaleen Sunny Deol Iyo Akshay Kumar Iyo Dagaalkii Taariikda Galay Ee Ka Dhacay Goobta Filmka Ziddi Lagu Duubaayey (+Sawiro) April 22, 2019
Wan Baryay Xitaa Waan Qabsan Gaaray Lugihiisa Alia Bhatt Oo Ka Hadashay Qaabka Ay Ku Heshay Saxiixa Filimka RRR April 22, 2019
Xidigo Kuwaaso Kusoo Caan-Bixi Lahaa Aflaamtan Laakiin Aysan U Suurto-Gelin (Qaybta 2aad) April 22, 2019